China Sports Insole Gel Massaging Insole ye Low Arches Orthopedic uye Plantar Fasciitis Kumhanya Kuisa fekitori nevatengesi | Bangni
Mitambo Insole Gel Massage Insole yeLow Arches Orthopedic uye Plantar Fasciitis Kumhanya Kuisa
Muforoma No: BN-2291
Mamiriro: Yese-zuva nyaradzo
• Pamusoro pevhavha: velet yeganda-inoshamwaridzika machira
• Insole: Viscoelastic polyurethane GEL huviri hushoma
• Kureba: yakazara yakazara tsoka yemubhedha
• Kurema: 0.14kg
• Simba rekugadzira: zviuru zviviri zvemaviri pamwedzi
• Mharidzo nguva: 3-5mazuva
Silicone gels inogona kugadzirirwa kuomarara kubva pane zvakapfava kusvika kune yakasimba. ivo generaly vanopa yakanaka kuvhunduka kuramba uye shear simba kunwa.
1. INSTANT PAIN Relief INSOLES: Govera kumanikidza uye udzikise kumanikidza uchifamba, uchimhanya, uchikwira uye nezvimwe.
2. SHOCK ABSORPTION: Ipa zvirinani kuchengetedza, kusimbisa arch kutsigira tsoka uye chitsitsinho mukombe kusvika pakunyatsogadzikana uye kugadzikana nhanho dzese.
3. VERSATILE: Yakakwana kune vatambi uye nyanzvi dzezvehutano avo vari kutsvaga nzira iri nyore yekuenderera mberi. Inokodzera avo vanoshanda netsoka dzavo, vanosanganisira vanamukoti, vanachiremba, vadzidzisi, vashandi, vabiki nevamwe. Zvakare zvinoshanda kumakumbo akatsetseka uye kurapwa kweparasiti fasciitis, kurwadziwa chitsitsinho, tsoka yekufona, chibage chetsoka uye chitsitsinho zviratidzo zvechitsitsinho.
4. Ruvara rwakagadzirirwa runogamuchirwa: tinogona kukupa iwe dhizaini dhizaini uye panguva imwechete isu zvakare tinogona kubatsira kukudziridza yako dhizaini. Muchina wedu unogona kupedzisa ruviri ruvara mune imwechete nguva uye hutete hutatu mune imwe yekugadzira mutsara. Inzwa wakasununguka kuti utaure nesu kuti utarise chero chako dhizaini chinoshanda kana kwete.
Currenlty, isu tine maviri akajairwa kurongedza zvigadzirwa: imwe i10 mapara mune imwe PP bhegi; imwe yacho yakarongedzwa kurongedza, inosanganisira Pepa bhokisi, blister kurongedza, PET bhokisi uye imwe kurongedza nzira.
Pashure: E-TPU Yakakwira-kusimba Massage Yemitambo Insoles
Zvadaro: Zvese-Zuva nyaradzo Anti-Kuneta Tsoka Pain Relife PU insole
Wemabhonzo Insert Yeakakomba Flat Tsoka, tsoka Pa ...
Two arambe achirema PU insole perforated nemhepo mweya ...
Quickfit kupisa-kuumbwa PU yeganda dhizaini yakajairwa ...
Antibacterial hwomutambarakede nyoro mitambo gel ...
Sustainable dzinongoitika cork vana insole zvinyoro f ...